ဓာတ်မှန်ရုပ်ရှင်စက်ရုံ | တရုတ် X-Ray ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
အရည်အသွေးမြင့် Kodak film D88+ original Dental Intraoral x-ray film တရုတ်မှတစ်ခါသုံးသွားဘက်ဆိုင်ရာအတားအဆီးရုပ်ရှင်
1. D88 X-ray Film ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုံးစွဲမှု
2. အရွယ်အစား: 31mm * 41mm
၃။ တောက်ပပြီးမှောင်နေတဲ့အခန်းထဲကို ၀ င်ပါ
4. 100pcs/box, 50boxes/carton၊
Kodak D88+ အရည်အသွေးမြင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာသားအိမ်စောင့်ရှောက်မှု Carestream x-ray film barrier film dental
kodak D-Speed ​​Caresteam dental x ray intraoral film barrier kodak ကင်မရာဖလင်
1. D-intraoral ဇာတ်ကားများ
3. အရွယ်အစား: 31mm * 41mm
၄။ တောက်ပ။ မှောင်သောအခန်း ၅ ခန်းအတွက် ၁၀၀ တန်/သေတ္တာ ၅၀ သေတ္တာ/ပုံး၊ ၁၂ ကီလိုဂရမ်/စကတ်
Koadk D-Speed ​​X-ray Film Carestream dental xray film barrier film သွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
Carestream kodak D-Speed ​​x ray film dental dental intraoral barrier x-ray film သွားဘက်ဆိုင်ရာကင်မရာ kodak film
သွားဘက်ဆိုင်ရာ Kodak D88+ Carestream D speed E speed x ray film တစ်ခါသုံးသွားဘက်ဆိုင်ရာအတားအဆီးရုပ်ရှင်
မူရင်းအသေးစိတ်နေရာအကျဉ်း၊ အကျဉ်းချုပ်၊ တရုတ်၊ တရုတ်မော်ဒယ်နံပါတ်: D88+, D88+ ပါဝါအရင်းအမြစ်: လက်စွဲအာမခံ-၂ နှစ်ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှု: အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်း: စေးသက်တမ်း ၁ နှစ် ...
အရည်အသွေးမြင့်သွားနှင့်ခံတွင်းဓာတ်မှန်ရုပ်ရှင်သည် Original Carestream D88+ Dental xray film ဖြစ်သည်
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်း၊ တရုတ်၊ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ် Name: kodak, Kodak Model Number: D88+, D88+ Power Source: Manual Warranty: ၂ နှစ် After-sale Service: Online နည်းပညာအထောက်အပံ့ပစ္စည်း: Resin ...
Kodak သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းရုပ်ရှင် Carestream D88+ Dental Intraoral x-ray film ဓာတ်ပုံသွားဘက်ဆိုင်ရာအတားအဆီးရုပ်ရှင်
kodak D-Speed ​​carestream x-ray film တစ်ခါသုံးသွားဘက်ဆိုင်ရာအတားအဆီးရုပ်ရှင်ကိုရောင်းရန်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်းဇာစ်မြစ်၊ အမေရိကန်ဆာမိုအာ၊ အမေရိကန်မော်ဒယ်နံပါတ်: D-Speed, D-Speed ​​Power Source: Manual Warranty: ၁ နှစ် After-sale Service: Online နည်းပညာအထောက်အပံ့ပစ္စည်း
မူလ Kodak D88+ Dental x-ray Film Carestream Intraoral barrier x-ray film သွားဘက်ဆိုင်ရာ
သွားဘက်ဆိုင်ရာ Kodak D-Speed ​​x-ray film D 88+ Carestream intraoral dental x-ray film
အရည်အသွေးမြင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်မှန်ရုပ်ရှင် kodak carestream D-Speed ​​film D 88+ barrier film dental
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်းဇာစ်မြစ်၊ အမေရိကန်ဆာမိုအာ၊ အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: kodak, Kodak မော်ဒယ်နံပါတ်: D-Speed, D-Speed ​​ပါဝါအရင်းအမြစ်: လက်စွဲအာမခံ-၁ နှစ်ရောင်းချမှု ၀ န်ဆောင်မှု: အွန်လိုင်းနည်းပညာအထောက်အပံ့ပစ္စည်း: ...